Ukubuyekezwa Kokufunda Kwempilo - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Ukubukeza Komfundi Wokufunda
Amaphuzu avelele we-LifeReader
Setha imingcele yokugcwalisa okuzenzakalelayo yokuvuselela ukufundwa kwengqondo okungaphazamiseki
Ukuhlolwa kwe-psychic eyengeziwe ngaphambi kokuqashwa
Ungakwazi ukuhlela izingcingo kusengaphambili
Zonke izimo zengqondo kufanele zidlulise isheke lokuhlola lokuhlola nokuhlolwa kwesizinda esingalungile ukuze usebenze LifeReader
Isithembiso sokuqala se $ .19 ngomzuzu emaminithini akho wokuqala we-10
Izinketho ezihlukahlukene zokuxhumana ezihlanganisa ifoni, ingxoxo, ne-imeyili
Imininingwane eminingi ye-psychic ukukusiza ukuba ukhethe umeluleki omuhle kakhulu kuwe
LifeReader uhlinzeke ngezinsizakalo zengqondo kusukela ku-2008
Asikho isiqinisekiso esinikezwa kwiwebhusayithi uma ungenelisekile ngokufunda
Amazinga we-Psychic aphezulu kunezinye izinkampani
I-Psychic Selection Pool
LifeReader kuthatha inqubo yabo yokuhlola ukuhlolwa kwengqondo engaba khona kakhulu, kufaka phakathi ukuhlolwa kokuhlolwa kanye nesheke sangemuva esibugebengu kwinqubo yokuqashwa. Lokhu kuqinisekisa ukuthi abeluleki abangenasipiliyoni nabacwaningi abanobucwebe banokhula ngaphandle, ngakho-ke kuphela okungcono kakhulu okwenziwe ukusika.
Ukukhetha i-Psychic enokwethenjelwa nenembile
Injini yokusesha yabo yokuhlunga ilinganiselwe ekukhethweni, kuphela ukunikeza ukusesha ngentengo, ukulinganiswa kwezinkanyezi nalabo abasanda kusayithi. Kodwa-ke, amaphrofayli ngamunye we-psychic athambekele ekujuleni kakhulu kunewebhusayithi eminingi yokufunda, ngokuya ngokuthi umsebenzi omningi we-psychic ufake kanjani ekhasini labo. Dlulisa amehlo kumpendulo yomeluleki ukuze uthole umqondo wokuthi benza kanjani namanye amaklayenti ngaphambi kokukhetha kwakho.
LifeReader I-psychics ihlawula kancane kunezinye amawebusayithi, kodwa ngamunye uye wadlulisa inqubo yokuhlola kahle futhi cishe abacebisi abanamava kakhulu. Ngamanye amazwi, uthola lokho okukhokhayo, noma kufanele kulesi simo. Ungasebenzisa inzuzo enkulu yokwethulwa kokuthola imizuzu yakho yokuqala ye-10 kuphela i-$ .19 ngomzuzu, ngakho ungazama umeluleki oyedwa noma ababili abane-psychic ngokutshalwa kwezimali okuncane kakhulu.
Ungakwazi ukuxhumana nomeluleki wengqondo ngefoni, ingxoxo, noma i-imeyili, kuye ngokuthandwa komuntu ukuthi banikela kanjani amasevisi abo. Ungakwazi ngisho nokubhuka isikhathi socingo kusengaphambili, kunokuba uzame ukubamba ingqondo yakho eyintandokazi ngengozi.
Iziqinisekiso nokubuyiselwa kwemali
Kuyinto emangazayo ukuthi kwiwebhusayithi ngakho-ke qaphela ukuhlola izimo ezingqondo abaqashayo, ukuthi abanikeli ngenqubomgomo ethile yokuqinisekisa, noma okungenani abanayo okushiwo kwiwebsite. Ngenkathi unethuba elingcono kakhulu lokuthola ukufundwa okuhle lapho ukhetha kusuka echibini labacebisi abanolwazi lwe-psychic, ngezinye izikhathi awuxhumani ne-psychic ethile. Isiqinisekiso sokunikeza ukubuyiselwa kwemali noma isikweletu kungaba yinto enhle kule website ehlonishwayo yokufunda i-psychic.
With LifeReader, ungakhokha okungaphezulu kwamanye amawebhusayithi we-psychic wokufunda, kodwa ungaqiniseka ukuthi noma yikuphi umeluleki oxhumana naye kusayithi sekubukeziwe kahle kokubili amakhono angqondo kanye nanoma yisiphi isizinda sobugebengu. Ngezinye izikhathi kubalulekile ukukhokhela okuncane kakhulu, ikakhulukazi uma usondela ekuqondisweni kwengqondo njengento eyinkimbinkimbi futhi hhayi nje into engafanele ukuyenza ukuze ujabule.